छोराछोरीको हत्यापछि परिवार नै विस्थापित ! - छोराछोरीको हत्यापछि परिवार नै विस्थापित !
छोराछोरीको हत्यापछि परिवार नै विस्थापित !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १२ आश्विन, 03:04:52 AM
सुनसरी । अघिल्ला वर्ष त्यहाँ कुनै न कुनै बाली लहलहाउँथ्यो । तर अहिले पूरै बाँझो छ । भोजपुरको अरुण गाउँपालिका ३ प्याउलीको ६ रोपनी जग्गामा एक वर्षयता दूबोसिवाय केही देखिन्न । घर छ, त्यो पनि सुनसान ।
परिवार रामै्रसँग धानेका थिए ३८ वर्षीय चेतनाथ फुयाँलले । पत्नी ३६ वर्षीया निर्मलाको भरथेग छँदै थियो । तीन सन्तानको भविष्य चम्काउने ध्याउन्नमा उनीहरूले आफ्नो खुसीलाई कहिल्यै महत्त्व दिएनन् । एकाएक उनीहरूको हाँसीखुसी जीवनलाई अन्धकारले छोप्यो ।
साढे ९ बजेतिर १४ वर्षीया छोरी सुुष्मा खाना लिएर पुगिन् । खाना खाएपछि छोरीलाई सम्झाए, ‘आफू पनि नुहाउनू, भाइलाई पनि नुहाइदिनू अनि पढेर बस्नू ।’ छोरीले चटपटे खान मन लागेको बताएपछि उनले गल्लाबाट झिकेर २० रुपैयाँ दिए ।
सबैले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाउने आश्वासन दिए,’ चेतनाथले भने, ‘क्षतिपूर्ति र राहत पनि दिने भने तर अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’ यस्तो प्रवृत्तिले आफूहरूलाई झन् दुस्खी बनाएको उनले बताए ।
२०७५, १२ आश्विन, 03:04:52 AM